Maanta ayuu bilaabanayaa damaashaadkii Pride - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Maanta ayuu bilaabanayaa damaashaadkii Pride
La daabacay tisdag 30 juli 2013 kl 09.23
Maanta oo talaado ah bisha Luulyana tahay 30 waxaa magaalada Stockholm ka bilaabanaya damaashaadka ay dadka jinsigooda xiiseeya isugu soo baxaan bartamaha magaalada oo loo yaqaan Pride. Mar ugu horreyseyna waxaa culeyska la saarayaa iftiiminta qoyska, iyo dhismaha qoyska wax iska beddeleen sanooyinkii ugu dambeysey. Sidaas waxaa shaaca ka qaaday madaxa qabanqaabada damaashaadka Pride oo lagu magacaabo Jörgen Eriksson.
- Sannadkaan waxaan go’aansannay in wax walba oo aan soo bandhigno laga dhex arko wax ku saabsan qoyska. Dhisme aqal oo lagu magacaabo Pride house waxaa si gaar ah looga la soconayaa barnaamijyo ku saabsan qoyska. Sidoo kale waxaa beerta ka jira barnaamijyo loogu talagalay carruurta. Waxaana halkaa hadalo ka jeedinaya dad kala duwan. Waxaanna sannadkaan diiradda saareynaa qoyska.
Jörgen Eriksson wuxuu madax u yahay Pride qaybta Stockholm, waana markii 16aad oo uu wax ka qabanqabiyo damaashaadka Pride. Daamaashaadkaan Pride waxaa marka ugu horreysa ku wajahan yahay dadka la isku yiraahdo HBT, laakiin cid walba waa lagu soo dhoweynayaa.
Isu soo baxaan waxaa sannad walba diiradda lagu saaraa mawduuc. Jörgen Eriksson wuxuu in sannadkaan mawduucu yahay qoyska iyo in dhismihiisa si dhab ah loo qeexo. Dusha aqalka lagu magacaabo Kulturhuset waxaa laga qabanqaabinayaa goob ay carruurtu isugu timaaddo oo lagu magacaabo Pride kids, halkaas oo loogu soo bandhigi doono sheeka-xariirooyin iyo muusig ay ku dheelaan. Isla aqalkaas qaybihiisa kale waxaa laga qabanqaabinayaa khudbado iyo aqoon-isweydaarsiyo la xiriira qoyska.
Waxaana markii ugu horreysey sannadkaan la qabanayaa xaflad loo sameynayo dumarka xiiseeya la galmoodka dumarka. Waxaana looga gol leeyahay in lagu hambalyeeyo gabdhaha kartida iyo quruxda badan oo hibada loo siiyey caqli badnida. Waxaana halkaas heeso iyo majaajilo ku bandhigi doona dad ay ka mid yihiin Loreen iyo Nour El Refai.
Dadku fekrado kala duwan ayey ka qabaan damaashaadkaan oo qaarkood waxay qabaan in uu noqday bannaanbax xafladeed oo aan si weyn ahmiyadda loo siin arrimaha siyaasadda. Kuwo kalena waxay in tigidhada lagu soo galo ay qaali yihiin amaba meesha damaashaadka lagu qabtaa ay tahay meel qalad ah.
Laakiin Jörgen Eriksson wuxuu sheegay in mar walba jiri doonaan dad aan qanacsanayn, laakiin uu dareensan yahay qabanqaabada damaashaadkani yahay mid aad u ahmiyad weyn.
- Waxaan isugu soo baxnaa bartamaha magalaada Stockholm, annagoo gaareynna 600000 oo qof oo damaashaadaya. Marka la eego ururada tabarucaadda wax uga soo qabanqaabiyey, waxaan oran karaa in sannadkaan dadka doonaya in ay ku tabarucaan ay gaareen heerkii ugu sarreeyey.